Dhageyso :-Gudomiye ku xigeenka gobolka gedo oo sheegay in Jubbaland aysan ka Talyin Gedo - Awdinle Online
Home News Dhageyso :-Gudomiye ku xigeenka gobolka gedo oo sheegay in Jubbaland aysan ka...
Dhageyso :-Gudomiye ku xigeenka gobolka gedo oo sheegay in Jubbaland aysan ka Talyin Gedo
December 14, 2019 (Awdinle Online) –Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaa xiisado siyaasadeed taas oo u dhaxeysa Ciidamadda Dowladda Soomaaliya iyo Dowladda itoobiya iyo maamulka Jubbaland,iyo Ciidmadda kenya oo dhinac.
Ciidamada kenya ayaa maalmihii dambe waxa ay wadeyn dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana asbuucyo ka hor madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid aadan loo diidey inuu galo degmooyin kamid ah gobolkaasi.
Warqad shaley kasoo baxdey Madaxweyne Ku-xigeenka 2-aad ayaa xilkii looga qaadey qaar kamid ah gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka gedo sida gudomiyaasha luuq iyo baardheere iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo
Gudomiye ku-xigeenka gobolka gedo Cusmaan Nuur Xaaji oo la hadlay Warbaahinta ayaa ka horyimid warqadda kasoo baxdey Jubbaland.
Waxa uu sheegay in jubbaland,aysan xilka ka qaadi karin islamar ahaantaana aan la aqoonsaneyn maamulkooda waxa uu tilmaamey in ciidmadda jubaland aysan soo galikarin degmooyinka gobolka gedo.
Dhanka kale, waxa uu sheegay in ceeb ay tahay in jubaland oo aan heysan gobokkaasi ay yiraahdaan xilkii ayaan ka qaadnay gudomiyaashaasi isagoo shaaciyey in deegaanada gobolka gedo ay yihiin xor aysana la mid aheyn magaaladda kismaayo.
Previous articleAmaanka madaxtooyada Soomaaliya oo si weyn loo adkeeyey
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo kulan la Qaatey Guddiga Dhex Dhexaadinta Soomaaliya & Soomaaliland